चीनले भुटानमा भवन बनाएपछि भारत चिन्तित, भारतको सुरक्षामा कति खतरा ? | Online Nepal
एजेन्सी । सन् २०१७ देखि डोकलाम पठारलाई लिएर भारत र चीनबीच सैन्य तनाव जारी छ।
डोकलाम पठारको भुटानी क्षेत्रमा चीनले नयाँ भवन निर्माण गरेको प्रमाणहरू अगाडि आएपछि भारत असहज स्थितिमा छ। भारतले चीनको कदमलाई यस क्षेत्रमा चीनको दाबीलाई बलियो बनाउने उपायको रूपमा हेरेको छ।
चीनिँया सेनाको गतिविधिहरूमा नजर राख्ने एक विश्वव्यापी अनुसन्धानकर्ताले भूटान र चीनको बीचमा डोकलाम नजिकैको विवादित क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेको भवनहरुको स्याटेलाइट तस्वीरहरु सार्वजनिक गरेको थियो।
विवादित क्षेत्रमा सन् २०२०–२१ मा चीनले यो निर्माण कार्य गरेको दाबी गरिएको थियो । चीनको १४ देशसँग २२ हजार ४५७ किलोमिटर लामो सीमा रहे पनि भारत र भुटानसँग मात्रै सीमा विवाद छ ।
यो नयाँ गतिविधिले भारतलाई समस्यामा पारेको छ किनभने यो क्षेत्र डोकलाममा भारतीय भूमिसँग जोडिएको छ। यस विवादित क्षेत्रमा चीनको निर्माण कार्यलाई लिएर सन् २०१७ मा भारत र चीनका सेना आमनेसामने भएका थिए र त्यसयता दुई देशबीच तनाव जारी छ ।
जुन २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रियो । भारत र चीनका सैनिकबीच भएको यो हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । पछि चीनले पनि आफ्ना चार सैनिकको मृत्यु स्वीकार गरेको थियो ।
भुटान भारत र चीन बीचको मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा काम गर्दछ। अब यहाँ चीनको गतिविधिले भारत र चीनबीचको तनाव फेरि बढाएको छ ।
भुटान र चीनबीच ४७७ किलोमिटर लामो सिमाना छ। यो देश भारतको लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले भारतको सिलगढी कोरिडोर (चिकन नेक पनि भनिन्छ) र चीन बीचको ढालको रूपमा काम गर्दछ। भारत उत्तर–भारतीय राज्यहरूसँग सिलगढी कोरिडोरबाट मात्र सडकद्वारा जोडिएको छ।
यस्तो अवस्थामा यसको सुरक्षा भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।
सीमा विवादमा चीन–भुटान वार्तालाई लिएर चिन्ता
चीन र भुटानले पनि अक्टोबर १४ मा सीमा विवादबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भुटान र चीनले सन् १९८४ देखि सीमा विवादमा वार्ता गर्दै आएका छन् ।
भारतले यसबारे सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिँदै यो घटनाक्रममा आफूले नजर राखेको जनाएको छ । भुटान र चीनबीच सीधा कूटनीतिक सम्बन्ध छैन र दुवैले दिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत सञ्चार गर्छन्। तर समझदारी पत्र (एमओयू) सार्वजनिक भएको छैन ।
यसको जवाफ दिँदै रक्षा विश्लेषक कर्नल दानवीर सिंहले ट्वीट गरे, “के यो भुटान र चीन बीचको कुनै सीमा विवाद समाधानको अंश हो? हामी यस बारे चिन्तित हुनुपर्छ।“
चार वर्षअघि डोकलाममा भारत र चीनका सैनिक ७३ दिन आमनेसामने भएका थिए । यो सैन्य तनाव अझै समाप्त भएको छैन। यस्तो अवस्थामा यो नयाँ घटनाले भारतको चिन्ता बढाउने छ ।
भारतको सुरक्षा खतरामा ?
भारतले चीनको उत्पादन गतिविधि र चीनले भारतको अरुणाञ्चल (जसलाई चीनले दाबी गर्छ) प्रवेश गरेको रिपोर्टलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि खतराको रूपमा हेर्छ।
विश्लेषकहरुका अनुसार भूटानको सहयोगमा चीन डोकलाम वरपरका रणनीतिक क्षेत्रहरू नियन्त्रण गर्न चाहन्छ र यसबाट चीनले सिलिगुडी करिडोर (जुन ६० किलोमिटर लामो र २२ किलोमिटर चौडा छ) तर्फ आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउन सक्छ। जसबाट भारतको सुरक्षामा चिन्ता उत्पन्न हुनेछ।
भुटान र चीनबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि विश्लेषकहरूले ग्लोबल टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, “यसबाट भुटानले आफ्नो सीमानाका मामिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा ह्यान्डल गर्न चाहन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। चीन भुटानतर्फ अघि बढ्ने क्रममा भारतले आफ्नो सैन्य तयारी बढाउनुका साथै यो रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण सहयोग बढाउनु पर्ने हुन्छ।’’
भारतविरुद्धको एकदिवसीय सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो
दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध भारतलाई ७० रनको अग्रता
भारतमा एकै दिन एक लाख ८५ हजार कोरोना संक्रमित थपिए